Ifowuni ephuthumayo! : UMartin Vrijland
Lixesha elixhamlayo, kuba ukuchasana nomsebenzi wam wokubhala ozimeleyo kuthatha ubuninzi. Oku kuthetha ukuba i-Facebook censorship inkulu kangangokuba inani leendwendwe ezivela kwi-Facebook kwiwebhusayithi yam liye lawa kakhulu. Oku kubonakala kwiimanani. Nangona imilayezo yabelwe ngamakhulu amaxesha, inani labafundi abafika kwisayithi yam nge Facebook alinyuli. Kucacile ukuba kukho i-lock censure kwi-Facebook kwaye oko kuthetha ukuba inkululeko yokuthetha kwiphepha ikhona, kodwa ekusebenzeni akukho mntu uyayibona kwakhona. Konke okuphambukayo kwiingcamango eziphambili okanye ezilawulwayo zenkcaso akuchazeki. Kukulungele ukuba nabalandeli abangaba ngu-18 abayi-Facebook kwi-Facebook, kodwa bawuboni nje imiyalezo yam okanye bengaboni kwakhona.
Kutheni ufanele uxhalabele ngaloo nto? Ngenxa yokuba abaninzi abantu bajongene nokulawulwa kwembono yebhokisi lokushicilela yeendaba eziqhelekileyo kunye nezinye izinto ezilawulwayo. "Hayi kwaye, abantu bahlakaniphile ngokwabo", unokucinga. Andiyicingi ukuba abantu bayisidenge; Ndiyathetha nje ukuba umdlalo uye waba yinkimbinkimbi kangangokuba ngamaxesha amnandi ukuva isandi esizimeleyo ngokwenene. Ndicinga ukuba ndibonise ukuba ndizama ukuphakamisa izinto ezichasayo ngokuchasayo, ukuphoyisa okanye ukuphazamisa.
Ukuba ufuna ukuba isandi esizimeleyo siqhubeke sikhona, ke inkxaso yakho ibaluleke kakhulu. Ndiza kuthwala zonke iindleko zeli bhsayithi kwaye ngenxa yokuba ndibeke intloko yam ngaphezu komhlaba igama lam litshitshiswe kakhulu kwi-intanethi, okwenza kube nzima ukwenza umvuzo. Ukulandela iziganeko ezikhoyo kunye nokufumana ukuphefumlelwa kokubhala yinto ezininzi zewebhu ezenza ngoncedo lweqela elincinane lokuhlela. Ngokuqinisekileyo banayo ingxowa-mali ye-AIVD. Ndiyenza yonke into ukusuka ku-A ukuya kwi-Z yonke mna kwaye kufuneka ndiphile ngaphandle kwengeniso. Oko kuthetha ukuba andinayo kuphela ulawulo lweeseva, ukuyila ngewebhu kunye nokugcinwa kobugcisa, kodwa ubhale kwakhona onke amanqaku kwaye kufuneka uphile ngokuxhasa kwakho. Oko kubonakala ngathi yingcezu yekhekhe, kodwa khumbula ukuba ezininzi iiwebhusayithi zisebenza nabahleli abaninzi kwaye mhlawumbi banalo ibhajethi enkulu.
Ndisandula ukubeka i-500 euro ukuphinda ikhombise ikhowudi ye-PHP eyadlulayo apho i-website isebenza, kuba le khowudi ayisekho inkxaso. Le yindleko enokubangela umlobi ozama ukugcina intloko yakhe ngaphezu kwamanzi. Iwebhusayithi isebenza ngokuphinda kwakhona. Eyona nto ibambezelayo kukukhangela iindlela zokwenzela ukucima.
Akukho sijwili, kodwa unxeba oluphuthumayo lokuba lilungu kunye nokuxhasa, kuba kuya kuba nzima ukuhlala. Yabelana ngamanqaku ngemilayezo yangasese, nge-imeyile okanye kwindawo yebhsayithi yam, kodwa sele sele: Yiba ilungu. Inkxaso yakho iyadingeka ngokukhawuleza! Siyabonga kwangaphambili!
tags: mnikelo, eziziimbalasane, bulungu, UMartin Vrijland, inkxaso
ngumntwana we-chris wabhala wathi:
12 Matshi 2019 kwi-22: 10
Kukho iiplani ezininzi zonxibelelwano, lixesha lokulahla i-Facebook, banento ethile ngokucwangcisa kwabo.
Ndikubona uMartin njengenxalenye ye-intanethi ye-intanethi, kubalulekile ukutyalomali kuyo ngoku, unayo inkxaso!
13 Matshi 2019 kwi-10: 53
Ukuba kukho ukhetho oluninzi kukuba, kwimbono yam, ingxaki ngqo. Abantu banokukhetha ukusuka kwimithombo emininzi yolwazi kunye neeplani apho ixesha lokuphanga koluntu libuyele, kodwa ngendlela eyahlukileyo.
Kwakusetyenziselwa ukucaca kwilizwe elingaphandle liqela elikulo, nokuba ingahambelani nenkolo. Ukuba awuzange ube nayiphi na iqela okanye ikholomu, awuzange uthathe inxaxheba kuyo nayiphi na into kwaye ngoko awuzange ube yinto. Le mihla yonke loo mihlathi ilahlekile ngaphandle kwaye ukhetha emva kwekhompyutheni okanye i-smartphone yeliphi iqela eliyiyo ... kwaye ufumana ulwazi olumbala.
Olu lwazi kunye nendlela yobomi bemibala kunye nokudukisa, njengokuba kwimihla yakudala ngexesha le-pillar, endaweni yolwazi oluncedo olusekelwe enyanisweni. Into eninzi abantu (okanye ayinayo) echaphazelekayo kwongezwa kumsebenzi wabo nanamhlanje ingaziwa. Nokuba abantu benza ngokwenene umsebenzi wabo mfihlelo, njengoko kubanjwe kwisivumelwano somsebenzi kunye nesigatya somyalelo. Igqwetha alithethi ukuba uthumela iileta ezisongela abantu abangenacala, kuba umxhasi wakhe uhlawula kakhulu loo ... nje ukunikela umzekelo. Abantu bakhetha ukugcina iimbonakalo kunye nokujongana nezinto ezingaphezulu kwilizwe langaphandle, ukuze bangabi nengozi yokufunyanwa abangaqhelekanga, ukuba bajonge ngeentamo zabo nokulahlekelwa isikhundla sabo.
Abantu kufuneka baqinisekiswe ngenye indlela ukuba bafune uMartin Vrijland ngokwabo. Oku kunzima kuba kukho ezininzi izichaso ezilawulwayo. Kunokwenzeka njani ukuba kukho inkcaso ephikisayo? Kubonakala ngathi ubuxoki bukhulu kangangokuba inyaniso enzima ukuyibona kunye nokukhathazeka kwethu. Uninzi lwabantu luyaphika xa lubona ukungabi nabulungisa kwiimeko ezikuyo okanye xa bebona ubuxoki abathile kwinkqubo. Abantu abemi besizwe awanamagorha, kodwa izimvu ezilungileyo. Kuphela xa ezi zimvu ziqala ukubona ukuba zibheke kwi-knife butcher, ngaba zikulungele ukwenza into ethile. Kodwa ngelishwa, nangona kunjalo, ininzi izimvu ziqala ukukhala okanye ukudiyeka kwengqondo, ukuze zingakwazi ukuchasa. Ngoko kufuneka sijonge imvu yokulwa!
Abaqhawe nabafayo abafuna inyaniso baya kufika ngokukhawuleza okanye kamva kwiwebhusayithi kaMartin Vrijland, kodwa sifumana njani le iigusha zokulwa?
13 Matshi 2019 kwi-03: 31
13 Matshi 2019 kwi-11: 28
Ndiyaqonda ukuba uthetha kakuhle.
Kodwa ndicinga ukuba lo mbhali usebenzisa i-Facebook ngokuchanekileyo kuba uluntu jikelele lukhona apho (ukuthetha ngeenkomo zezilwanyana)
Kodwa yiziphi iiplani ozijongayo?
17 Matshi 2019 kwi-12: 27
u-hey keazer, ewe uyaqonda ukuba i-FB yiplatifomu efanelekileyo yokufikelela kuluntu jikelele, sele isebenzise i-FB iminyaka emibini, mna ndibone ukucandwa kwe-FB, amaninzi amanqaku asuswe kwi-block ye-30 yesikhombi okanye ngokupheleleyo, emva kokuba ukufunyanwa kwe-whatsapp, i-FB ngoku ikhulu ngokuthelekiswa nakweyiphi enye ipulatifomu xa ifikelela kudatha. Andinamava amaninzi namanye amaqonga, kodwa ngokuqinisekileyo kukho i-80 kwi-akhawunti ye-300 yezigidi eziza kunika enye into. Ukuba umntu uba mkhulu kakhulu kwaye unamandla, umntu unokutshintshela ukubopha le gunya. Ekuqaleni kweliveki, i-FB ivimbile intambo yase-Zero, emva kokugqithisa okukhulu kwi-intanethi kodwa nakwizombusazwe, yonke into yaguqulwa kwiiyure ze-24 kwaye i-FB yathi yenze iphutha langaphakathi, le nto yayiphosiso okanye ngaphezulu vavanyo lokuphendula, ngubani owaziyo. kum mna nditsho i-bye bye FB
13 Matshi 2019 kwi-16: 51
UMartin ufuna ukuxhaswa. Bonke banikela ngamandla am ngokwamandla okanye ukuba lilungu. Oku kufuneka kwenzeke. UMartin nguye kuphela ongekho phantsi kolawulo lwamazwe !!!!
« UKUBHALA: I-alarm enkulu yenhlekelele yenyukliya yehlabathi!
I-49 yabulawa ekuhlaselweni kwee-mosque ezimbini e-Christchurch eNew Zealand »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.417.707